Haverina hodinihina ny fifanarahana: lafo avo 25 heny ny vidin’ny herinaratry ny tsy miankina | NewsMada
Haverina hodinihina ny fifanarahana: lafo avo 25 heny ny vidin’ny herinaratry ny tsy miankina
Midangana ny ividian’ny Jirama ny herinaratra amin’ireo orinasa tsy miankina mamatsy azy. Mbola iantohan’ny Jirama ihany koa anefa ny solika mampandeha ny milina mamokatra herinaratra an’ireo tsy miankina ireo.
Lafo! Midangana izay tsy izy ny vidin’ny herinaratra vidiana amin’ireo orinasa ireo. Araka ny fanambaran’ny tomponandraikitry ny Jirama, latsaky ny 10 Ar ny vidin’ny 1 KWH ny herinaratra avy amin’ny tohodrano, toy ny any Andekaleka, nefa mividy 250 Ar/KWH amin’ireo orinasa tsy miankina ny Jirama. Araka ny vaovao nomen’ny minisitry ny Angovo, Ramaroson Andry, tao anaty tambajotra seraserany, mbola tsy ampy indray aza ny fatran’ny solika novatsian’ilay orinasa tsy miankina iray, ny alatsinainy teo, nahatonga ny herinaratra tsy ampy 100 MW tamin’iny fotoana iny raha toa ka tokony ho 30 MW.
Tonga saina ny Jirama sy ny fanjakana, ankehitriny, ka nanapa-kevitra fa tsy hanome vahana ny orinasa tsy miankina intsony. Hiverenana hifampidinihina ny votoatin’ny bokin’andraikitra an’ireo orinasa ireo.
Vidiana lafo noho ny an’ny mpanjifa tsotra ny solika
Marihina, fa lafo lavitra mihoatra amin’ny solika amidy amin’ny mpanjifa tsotra koa ny hivarotan’ilay orinasa tsy miankina izany amin’ny Jirama, sady mamatsy herinaratra ihany koa izy. Mahavariana ihany izany fifanarahana izany, amin’ny lafiny ara-barotra satria tena tsy araka ny fenitra ara-toekarena, mahatonga ny fatiantoky ny Jirama tsy mety tafarina.
Manampy ireo, hotohizana ny famokarana herinaratra avy amin’ny tohodrano. Hatreto anefa, orinasa tsy miankina avokoa ny mamokatra izany, toy ny any Farahantsana, ny tetikasa Sahofika any Antsirabe Ambaositra, ny vinavina tetikasa fanitarana ny Volobe Toamasina, izay fotodrafitrasan’ny Jirama, saingy tadiavina hafindra amin’ny tsy miankina. Hany an’ny Jirama, ny any Andekaleka, Mandraka, Antelomita. Mandeha amin’ny gropy ampiasana solika kosa ny eny Ambohimanambola.